News – REDPlayer
Current and recent news from gaming industry
Weekly New ios & Android Release Witcheye Witcheye ဆိုတဲ့အတိုင်း ကို်က မျက်လုံးတစ်လုံးနေရာက ပါဝင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Side scrolling (ဘေးတိုက်သွားတဲ့ဂိမ်း) ဖြစ်တဲ့အတွက် အများစုနဲ့တော့ မစိမ်းပါဘူး။. Boss fight တွေကတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ အရင်စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နည်းနည်းခက်ချင်တယ်။ App Store Play Store Mystic Vale : Mana Storm ဒီတစ်ခုကတော့ လက်တွေ့အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့ CCG Mystic Vale ဆိုတဲ့…
Bethesda ကထုတ်တဲ့ Skyrim ကို PC ဖြစ်ဖြစ် console မှာဖြစ်ဖြစ် ဆော့ခဲ့တဲ့ fan တွေကတော့ mobile ကိုရောက်လာတဲ့ The Elder Scrolls: Blades ကို ဆော့ဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ Elder Scrolls ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အမိုက်စားတွေကို ကူးယူပြီး mobile platform မှာဆော့လို့ရအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလို့ပဲပြောရမှာပါ။ ဒီတော့ ဖုန်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ Skyrim မဟုတ်ပါဘူး။ Skyrim universe ထဲမှာပဲရှိနေပြီး quests တွေရှိပေမယ့်…
ကျွန်တော်တို့တွေ အဆင်သင့်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ… လိုက်မှီဖို့ကြိုးစားဆဲပဲဖြစ်စေ.. game တွေကတော့ နောက်ထပ် အဆင့်တစ်ခုကို သိသိသာသာ ခြေလှမ်းနေကြပါပြီ။ Google က streaming platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Stadia ကိုကြေငြာပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာပဲ Apple Arcade ဆိုတဲ့ platform အသစ်တစ်ခုကိုလည်း Apple ကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာရယ်ညာရယ်သေသေချာချာ မပြောနိုင်သေးပေမယ့် စိစစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကို apple platform ဖြစ်တဲ့ iPhone, iPad, Mac နဲ့ Apple TV မှာ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံကတော့…
PUBG chicken dinner REPLAYS (in 2D)
[zawgyi] PUBG မှာ ပွဲတစ်ပွဲကစားပြီးသွားရင် ပွဲတွေကို replay မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ (2D) နဲ့ကြည့်ချင်ရင်တော့ MinMax ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ indie website တစ်ခုကိုသွားကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ သူက ပွဲတွေကို 2D ပြန်ပြောင်းပြီးပြပေးထားဆိုတော့ မြေပုံတစ်ခုလုံးကို ခြုံပြီးမြင်ရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင် animation လေးတွေလုပ်ထားတာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ MinMax မှာကတစ်ခြား Slay the Spire, Subnautica တို့လိုတစ်ခြား ဂိမ်းတွေအတွက်လည်း tools တစ်ချို့ရှိပါသေးတယ်။ ဒီမှာတော့ chicken dinner ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ မကြာခင်ကပြီးသွားတဲ့ပွဲတွေကို…
$600,000 တန် PUBG Mobile Star Challenge
[zaw-gyi] PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ကတော့ နောက်ထပ် အသစ် esport ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ PUBG Mobile Star Challenge လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ tournament ပြီးလို့ တစ်လပဲရှိပါသေးတယ်။ ပွဲကကပ်တယ်လို့တော့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဝင်ပြိုင်မယ့်ဒေသတွေကတော့ အမေရိကအကုန်လုံး၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အာရှနိုင်ငံတွေလည်းပါပါတယ်။ ဆုကြေးလုံးပေါင်းကတော့ $600,000 ဆိုတော့ မနည်းပါဘူး။ ဒါနဲ့ သန်း၁၀၀ကျော် download လုပ်ထားတဲ့ PUBG ကိုမိတ်ဆက်စရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ ဝင်ပြိုင်မယ့်အဖွဲ့တွေက…
သက်တမ်းရှည်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် မျော်လင့်ရမယ့် Fallout 76
[zawgyi] Fallout game series တွေကိုအစဉ်တစိုက်ကစားလာတဲ့ gamer တွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Fallout 76 မှာတော့ multiplayer ကိုအဓိကထားပြီး တော့ အမြဲတမ်း online ရှိနေဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒီလိုအခင်းအကျင်းက အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။. ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း Bethesda ရဲ့ games-as-a-service ဆိုတဲ့ business model အရတော့ DLC တွေဆက်ထုတ်ပြီး gamer တွေကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လာနေအောင်ဆွဲဆောင်ထားဦးမှာပေါ့။ ဆိုပါတော့… မေးခွန်းက ဘယ်လောက်အချိန်ကြာကြာဆွဲဆောင်ထားနိုင်မလဲ?…
Campaign တွေမပါလာတဲ့ COD
Call of Duty ကိုအစောပိုင်း ဂိမ်းတွေကတည်းက အများစုကတော့ ဆော့ဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ internet မရတဲ့ အချိန်တွေမှာ single player campaign တွေဆော့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ story mode ထဲက Price, Soup တို့ကို ရင်းနှီးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေကနေခွဲထွက်လာမယ့် Call of Duty: Black Ops4လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့၊ Pre-order မှာလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီဂိမ်းမှာ အရင်လို traditional player campaign တွေပါလာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ပဲ…
Android & iOS ဂိမ်းအသစ်များ, weekly
A moment with ShineLayz (Caster,GCN, Game cast network Myanmar)
PC တွေရဲ့ Graphic setting ကိစ္စနည်းနည်းပါးပါး